Vaovao - Inona no ataon'ny harona plastika
Inona no atao hoe harona plastika
Ankehitriny dia hanana ny sakafokitapo famonosana, Andeha hojerentsika anio ny fiantraikan'ny kitapo famonosana sakafo
1. Fikarakarana ara-batana.Ny sakafo voatahiry ao anaty kitapo fonosana dia mila misoroka ny fametahana, ny fikapohana, ny fahatsapana, ny fahasamihafan'ny mari-pana ary ny tranga hafa.
2. Tazony ny akorany.Ny akorandriaka dia afaka manasaraka ny sakafo amin'ny oksizenina, ny etona rano, ny tasy, sns., Ary ny anti-leakage dia singa ilaina amin'ny fandrafetana fonosana.Ny fonosana sasany dia misy desiccant na deoxidizer mba hanitarana ny androm-piainany.Ny fanadiovana na fanalana ny rivotra avy ao anaty kitapo ihany koa no fomba voalohany hamenoana sakafo.Ny fitazonana ny sakafo ho madio, vaovao ary feno mandritra ny androm-piainany no asa voalohany amin'ny kitapo famonosana.
3. Encapsulate na apetraka ao anaty fonosana iray ihany.Ny famenoana entana kely mitovy karazany ao anaty fonosana iray dia fomba tsara hitehirizana ny volume.Ny vovoka sy ny zavatra granular dia mila fonosina.
4. Ampitahao ny hafatra.Ny fonosana sy ny fametahana dia milaza amin'ny olona ny fomba ampiasana, entina, mitadidy na mitantana ny fonosana na sakafo.
5. Marketing.Ny etikety boaty dia matetika ampiasaina amin'ny varotra mba hampirisihana ny mpividy hividy vokatra.Ny fandrafetana fonosana dia tranga tsy misy dikany sy miova nandritra ny am-polony taona maro.Fifandraisana ara-barotra sy drafitra an-tsary nampiharina tamin'ny famonosana sy (noho ny antony maro) ny fampisongadinana ny varotra.
6. Fiarovana.Ny fonosana dia afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampihenana ny loza ateraky ny fiarovana amin'ny fitaterana.Ny fonosana koa dia manakana ny sakafo tsy hiditra amin'ny vokatra hafa.Ny famonosana sakafo koa dia mampihena ny mety hisian'ny fangalarana sakafo.Ny fonosana sakafo sasany dia tena matanjaka ary misy marika fiarovana, ny vokany dia ny fiarovana ny tombontsoan'ny orinasa amin'ny fatiantoka.nykitapo fonosanaAfaka manana logo laser, loko manokana, fanamarinana SMS ary marika hafa.Ankoatr'izay, ny mpivarotra dia miezaka ny misoroka ny halatra amin'ny alàlan'ny fametrahana etikety fanaraha-maso elektronika amin'ny fonosana sakafo, izay azo entina any amin'ny fivoahan'ny fivarotana ho an'ny demagnetization.
7. Mety.Ny fonosana dia mety manana endri-javatra manamora ny fanampim-panampiana, ny fampidinana, ny fampidinana, ny fametrahana, ny fampiratiana, ny fivarotana, ny fanokafana, ny famerenana, ny fampiharana ary ny fampiasana indray.
Fotoana fandefasana: May-06-2022